Dagaalki Bakistaan iyo Hindika 1971 - Wikipedia
Dagaalki Bakistaan iyo Hindika 1971
Pakistan India Doorashyoorinka - Aasiya
Dagaalkani wuxuu ahaa mid gaar ah oo aan ku lug laheyn arrinka Kashmir, laakiin wuxuu ahaa mid aad u cakiran dhibaatadii ay abuurtay dagaalkii sokeeye ee ka dhexeeyey East Bakistaan oo u dhexeeyay Sheekh Mujibur Rahman, Hogaamiyaha Bariga Bakistaan, iyo Yahya Khan iyo Zulfikar Ali Bhutto, hogaamiyaasha Bakistaan. Tani waxay ku dhawdahay caddaynta Xorriyadda Bangladesh ee ka timid nidaamka gobolka ee Bakistaan. Ka dib baadhitaankii howlgalinta iyo xasuuqii Bangladesh ee 1971-kii, ku dhawaad ​​10 milyan oo Bengalis ah oo ku yaalla Bariga Bakistaan ayaa magangelyo ku helay Hindiya deriska ah. Hindiya ayaa soo faragalisay dhaqdhaqaaqa xoraynta ee Bangladesh. Ka dib markii weerar ballaadhan oo horey loogu qaaday weerarkii Bakistaan, colaad buuxda u dhaxeysa labada dal.
Pakistan ayaa weerar ku qaaday meelo badan oo ku yaalla xudduudaha galbeedka Hindiya ee Bakistaan, laakiin ciidamada Hindiya ayaa si guul leh u haystay boosaskooda. Ciidamada Hindiya ayaa si deg deg ah uga jawaabaya dhaqdhaqaaqa ciidamada Bakistaan ​​ee galbeedka waxaana ay sameeyeen guulo hor leh, oo ay ka mid yihiin qabashada 5,795 mayl oo isku wareeg ah (15,010 km2) dalka Bakistaan (dhulkii ay ka heleen Hindiya ee Bakistaani Kashmir, Bakistaani Punjab iyo Sindh, laakiin waxay dib ugu soo celisay Pakistan Heshiiska Simla ee 1972, oo ah sida loola dhaqmay). Labo todobaad gudahood ah dagaal xooggan, ciidamada Bakistaan ​​ee Bariga Bakistaan ayaa isku dhiibay taliska wadajirka ah ee India iyo Bangladeshi kadib markii ay abuurtay Jamhuuriyadda Dadka Bangladesh. Dagaalkaani wuxuu arkay tirada ugu badan ee ku dhaawacmeen dagaalladii Hindiya iyo Bakistaan, iyo sidoo kale tirada ugu badan ee maxaabiista dagaalka tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka ka dib markii la isku dhiibay in ka badan 90,000 oo ah millatariga Bakistaan iyo rayidka. Afhayeen u hadlay Pakistan ayaa yiri "Bakistaan waxa ay lumisay kala badhkii ciidankeeda, rubuc ka mid ah ciidamadeeda iyo saddex meelood oo ciidankeeda ah".
Khilaafka nukliyeerka ee u dhaxeeya labada wadan waa dabeecad istiraatiiji ah oo leh caqiido nukliyeer ah oo Bakistaan ah oo tilmaamaya siyaasad weerar ah, inkastoo weerarka kaliya la bilaabi doono haddii kaliya, haddii ciidamada Bakistaan aysan awoodin inay joojiyaan duullaan (tusaale ahaan 1971 dagaalka) ama weerarka nukliyeerka ah ayaa la bilaabi doonaa ka hor imaadyada Bakistaan, halka Hindiya ay leedahay siyaasad cadeynaysa inaysan adeegsaneyn wax bilaash ah.
Pokhran-I (Smiling Buddha): 18-kii Maajo 1974-kii ayaa Hindiya ku burburtay 8-kilo qalabka nukliyeerka ee Pokhran Test Range, noqoshada waddanka ugu horreeya ee noqda nukliyeer awood leh oo ka baxsan shan xubnood oo joogta ah Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay iyo sidoo kale jiidaya Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Zulfikar Ali Bhutto ayaa ku dhaariyay Hindiya "Mujaahidiinta waxay jeclaan lahaayeen in ay haystaan ​​bamka nukliyeerka xitaa haddii ay tahay inay cunaan cawska" . Guddoomiyaha Guddiga Tamarta ee Pakistan Atomic Energy (MIEC) Munir Ahmed Khan ayaa sheegay in imtixaanku uu qasbi doono Bakistaan inay tijaabiso bamka naasiga ah.
Kirana-I: Sannadkii 1980-yada waxaa jira baaritaanno baaritaan oo kala duwan oo ay sameeyeen PAEC, oo uu hoggaamiyo guddoomiyaha Munir Axmed Khan oo qarsoodi ah oo sir ah. Guryaha Kirana Hills, Sargodha, ayaa la sheegay inay caajisey ka dib markii goobaha baadhitaanka nukliyarka ee Chagai, ay si weyn u rumaysantahay in tunel loo dhisay inta u dhaxaysay 1979 ilaa 1983. Sida Chagai, tunnelada Kirana Hills ayaa la caajisey kadibna shaabadeeyey iyo hawshaan waxaa sidoo kale lagu sameeyey DDB-da DTD.  Later ka dib sicirka sir-doonka Maraykanka iyo dayax-gacmeedka diiradda saarnaa bogga Kirana Hills, waxa loo baahday in laga tago, tijaabada hubka nukliyaddana waxaa loo beddelay Kala Chitta Range. Pokhran-II (Operation Shakti): 11kii Maajo 1998-kii Hindiya ayaa shan farsamo oo nukliyeer ah ku dhufatay Pokhran Test Range. Iyadoo lagu qancinayo iyo oggolaansho ballaadhan oo ka timid bulshada Hindida ayaa timid ciqaab caalami ah oo ah fal-celin ay ku sameeyeen imtixaankan, waxyeellada ugu weyn ee ka imanaysa Bakistaan oo dhan. Kacaan wayn ayaa lagu soo qaaday dalka Bakistaan, kaas oo soo saaray qoraal cad oo sheeganaya in Hindiya ay ku dhiirigelisay tartanka nukliyarka nukliyarka ee gobolka. Bakistaan ayaa wacad ku martay in ay la xiriirto awoodda nukliyeerka Hindiya ee Hindisaha sida: "Waxaan ku jirnaa tartan rasaas ah oo dhexmara jihaadka hoose".
Shaksi-I: (Youm-e-Takbir) Bisha Janaayo ee Pokhran-II, 28-kii Maajo 1998-ba Bakistaan waxay ku qarxisay shan qalabka nukliyeerka ah si ay ugudbiyaan Hindiya tartanka hubka nukliyarka. Bakistaani dadwaynaha, sida Hindiya, waxay ka jawaabtay dabaaldeg iyo dareen sare u leh umadda si ay uga jawaabaan Hindiya oo noocan oo kale ah oo noqonaya awoodda kaliya ee nukliyeerka nukliyeerka ah. Maalinta dambe waxaa la siiyay magaca Youm-e-Takbir si aad u sii sheegto sida kale.
Maxaynan Markhaatiyaasha Yehowah Dagaal uga Qaybqaadan?
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dagaalki_Bakistaan_iyo_Hindika_1971&oldid=223039"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 3 Nofeembar 2021, marka ee eheed 18:46.